UNESCO inotyisidzira kubvisa Stonehenge chinzvimbo chenyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » UNESCO inotyisidzira kubvisa Stonehenge chinzvimbo chenyika
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Theme Parks • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nekuda kwekuvakwa kwemugwagwa wepasi pevhu, Stonehenge achagamuchira chinzvimbo chechinhu chiri kutyisidzirwa, chinozoteverwa nekubviswa pane runyorwa rwetsika nhaka.
Kugadzirwa kwemigwagwa kunotyisidzira chinzvimbo cheStandhenge's World Heritage.
Pasi pevhu corridor projekiti yakatenderwa munaNovember wegore rapfuura.
Iyo corridor ichave angangoita matatu makiromita kureba.
Stonehenge inogona kurasikirwa nenzvimbo yayo seWorld Heritage Saiti nekuda kwekuvakwa kwetangi iri pasi pechiratidzo, maererano nemishumo ichangoburwa.
The United Nations Dzidzo, Sainzi uye Tsika Sangano (UNESCO) yambira vakuru veBritish kuti nekuda kwekuvakwa kwemugwagwa wepasi pevhu, Stonehenge ichagamuchira chinzvimbo chechinhu chiri kutyisidzirwa. Uye izvi zvichateverwa nekubviswa pachinyorwa chenhoroondo yetsika.
Iyo yepasi pevhu kodhi chirongwa yakatenderwa neBritish Ministry of Transport munaNovember wegore rapfuura. Yakagadzirirwa kurerutsa traffic yekuremara yeA303 mota. Iyo corridor ichave angangoita matatu makiromita kureba.
Stonehenge chiyeuchidzo chepamberi paSalisbury Plain muWiltshire, England, mamaira maviri kumadokero kweAmesbury. Inosanganisira rin'i yekunze yematombo emabwe emadziro akamira, rimwe nerimwe rakatenderedza mamita gumi nemana pakureba, mamita manomwe paupamhi, uye riine huremu hunosvika matani makumi maviri nemashanu, rakapetwa nekubatanidza matombo epamusoro epakati.
Mukati mune mhete yemabhuru madiki. Mukati maaya mune emahara-akamira trilithons, maviri bulkier akatwasuka Sarsens akabatanidzwa nechero lintel. Iyo chivakwa chese, ikozvino chakashata, chinotungamirwa kwakanangana nekubuda kwezuva pane zhizha solstice. Matombo akaiswa mukati mevhu repasi nepakati penzvimbo yakaoma kwazvo yeNeolithic neBronze Age zvivakwa muEngland, kusanganisira mazana emazana tumuli (burial mounds).
Archaeologists vanofunga kuti yakavakwa kubva 3000 BC kusvika 2000 BC. Iyo yakatenderedza denderedzwa repasi uye mugero, izvo zvinoumba chikamu chekutanga chechiyeuchidzo, chakanyorwa kusvika munenge muna 3100 BC. Radiocarbon kudanana inoratidza kuti mabhatani ekutanga akasimudzwa pakati pa2400 na2200 BC, kunyangwe vangave vaive panzvimbo saizvozvowo 3000 BC.
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa masitepisi muUnited Kingdom, Stonehenge anoonekwa seyeBritish tsika icon. Chakave chakachengetedzwa zviri pamutemo Chirongwa cheKarekare kubva muna 1882, apo mutemo wekuchengetedza zvivakwa zvekare wakatanga kuunzwa muBritain. Iyo saiti nenzvimbo dzakapoteredzwa zvakawedzerwa kune runyorwa rweUNESCO rweWorld Heritage Sites muna 1986. Stonehenge ndeyeCrown uye inotarisirwa neChirungu Heritage; ivhu rakatenderedza nderaNational Trust.